Everton oo guul soo laabasho ah kaga gaartay Arsenal garoonkeeda Goodison Park… +SAWIRRO – Gool FM
(Liverpool) 06 Dis 2021. Everton oo guul soo laabasho ah kaga gaartay Arsenal garoonkeeda Goodison Park, kaddib markii ay kaga adkaatay 2-1, xilli ciyaartan lagu soo xiray kulammada Isbuuca 16-aad ee horyaalka Premier League.
Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 0-1 ay ku hoggaamineysay kooxda martida ahayd ee Arsenal.
Daqiiqadii 45 + 2 kooxda Arsenal ayaa hoggaanka u qabatay ciyaarta waxaana 0-1 ka dhigay Martin Ødegaard kaddib markii uu caawin ka helay saaxiibkiis Kieran Tierney.
80 daqiiqo marka ay ciyaarta mareysay kooxda Everton ayaa dhalisay goolka barbardaca, waxaana 1-1 ka dhigay laacibkooda reer Brazil ee Richarlison.
Daqiiqadii 90 + 2-aad kooxda Everton ayaa markan hoggaanka u qabatay ciyaarta waxaana 2-1 ka dhigay dheesha Demarai Gray oo dhaliyay gool cajiib ah, kaddib markii uu caawinta goolkan ka helay saaxiibkiis André Gomes
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku dhammaatay 2-1 ay kaga adkaatay Everton kooxda Arsenal oo marti ugu ahayd Goodison Park, kaddib guuldarradan Gunners ayaa hadda kaga jirta dhanka kala sarreynta horyaalka Premier League kaalinta 7-aad iyada oo leh 23 dhibcood.